Mareykanka oo go'aan ka soo saaray muddo xileedka DF shirka Dhuusamareeb 3 - Caasimada Online
Home Warar Mareykanka oo go’aan ka soo saaray muddo xileedka DF shirka Dhuusamareeb 3
Mareykanka oo go’aan ka soo saaray muddo xileedka DF shirka Dhuusamareeb 3
Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Mareykanka ayaa qoraal cusub kasoo saartay xaaladda siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan shirka Dhuusamareeb 3 iyo doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan.
Qoraal kooban oo safaaradda Mareykank ay soo dhigtay barteeda twitter-ka ayey ku sheegtay inay si aad ah u sugeyso natiijada shirka saddexaad ee Dhuusamareeb, inkasta oo ay jirto cabsi la xiriirta inay u eg tahay in shirka uusan qabsoomi doonin waqtiigii loogu talo-galay oo ah 15-ka bishan
Dowladda Mareykanka waxay sidoo kale dalbatay in doorashada Soomaaliya ay waqtigeeda ku dhacdo, islamarkaana aan la sameyn wax muddo kordhin ah.
“Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxay si aad ah u sugeysaa natiijada shirka Dhuusamareeb 3. Baahida loo qabo wada-tashi ballaaran iyo isu-tanaasul dhab ah waa muhiim. Hanaanka doorashada waa inuu noqdaa mid ay saldhig u tahay taageerada guud ee dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah, iyo saamileyda kale ee siyaasadda dalka. Doorasho waqtigeeda ku dhacda, muddo kororsi la’aan,” ayaa lagu yiri qoraalka Mareykanka.
Qoraalka kasoo baxay dowladda Mareykanka ayaa ah mid kale oo u muuqda inay hadallo kulul farriin ugu direyso dowladda Soomaaliya, oo aad loo rumeysan yahay inay ku howlan tahay muddo kororsi.
Mareykanka ayaa markii xilka laga qaaday ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre aad u dhaliilay Villa Somalia iyo baarlamanka, wuxuuna ku hanjabay inuu tallaabo ka qaadi doono koox uu ugu yeeray qas-wadayaasha Soomaaliya, oo aan la magacaabin.